Daawo Sawirro) Qorax Madoobaad culus oo laga dareemay inta badan gobolada Maraykanka – dulmidiid
August 22, 2017 Warka No comments
Daawo Sawirro) Qorax Madoobaad culus oo laga dareemay inta badan gobolada Maraykanka
Qorax Madoobaad aad u daran ayaa laga dareemay qeybo ka mid ah dalka Maraykanka iyo dalal kale oo ku yaalla Qaarada Amerika.
Dadweyne fara badan ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyo meelaha la isugu yimaado ee magaalada Washington iyo magaalooyin kale oo badan kuwaasoo daawanayey qorax madoobaadka oo bilowday wax yar ka dib markii ay qoraxdu soo baxday xiliga Maraykanka.
Dadka ayaa waxaa indhaha ugu jiray ookiyeyaal gaar ah oo loogu talo galay marka qorax madoobaadka la eegayo, kaasoo dhaqaatiirtu ka digeen in la’aantiis aan la eegin qoraxda si falaaraha qoraxda aysan u waxyeelin aragga.
Qorax madoobaadkan oo horey loo shaaciyey inuu dhici doono ayaa waxaa maalmahan dadweynaha Maraykanku ay si weyn u iibsanayeen ookiyaalaha loogu talo galay, iyadoo shirkadaha soo saara ay sheegeen iney macaash gaaraya malaayiin dolar ka sameeyeen ookiyaalahan.
Madaxweynaha Maraykanka Trump ayaa ka mid ahaa dad daawanayey qorax madobaadka, waxaana la arkayey isaga iyo xubno ka tirsan qoyskiisa oo gashan ookiyaalaha loogu tala-galay, isla markaana eegaya qoraxda.
Qorax Madoobadkan ayaa si weyn u saameeyey qeybo ka mid ah dalka Maraykanka, isagoo maalinta u bedelay sida habeen gudcur ah oo kale, waxaana qorax madoobaadku uu gaaray meelaha qaar heer qoraxda oo dhan laga waayo wax iftiin ah.
Culimada Sayniska ee arrimahan ku xeel-dheer ayaa sheegaya in sababta qorax madoobaadka keenta ay tahay dayaxa oo kala dhex gala dhulkan aynu ku nool nahay iyo qoraxda arintaasoo sababta in la waayo iftiinka qoraxda.
Faahfaahinta dagaal culus Oo Shalay ilaa Xalay Ka dhacayay inta udhexeysa Deganada Buq Kosarar ilaa Ceel-Cade ee Gobolka hiraan
Xukuumada Somalia oo ka hadashay Xaalada Dadka Dhaawaca ah ee la geeyay Suudan.
(Daawo Sawirro)Dhismo iyo dayactir laga bilaabay Wadada laamiga ee ku bur buray qaraxii Zoobe
Madaxweyne Farmaajo : Waxaan dhiseynaa ciidanka difaaca dadweynaha
Dibad baxyo ballaaran oo maanta ka dhacaya magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, dhuusa mareeb,iyo Beledweyn
admin on Mareykanka oo weerar cirka ah ku dilay dagaalyahanno ka tirsan Al-shabaab
© 2017 dulmidiid